ME AND MY FEELINGS: May 2010
केही मुक्तकहरु !!!
उकाली ओराली जिन्दगीका चढ्न झर्न कर लाग्छ ।
जती खोज्छु सुखसयल झनै झनै पर लाग्छ ।
खैर ! सम्झौतामै रम्न खोज्छु, देखावटी हाँसो लिई,
यही खोक्रो खुशीको नि डाह गर्नेको डर लाग्छ ।
चाकडी र चाप्लुसीले जताततै डेरा जमाएको देखे ।
इमान्दारी माथि बेइमानिले घेरा लगाएको देखे ।
घाटा केही छैन भने, के भयो र 'हो हजुर'भन्न,
गधाले 'गाई हुँ' भन्दा भेडाले मुन्टो हल्लाएको देखे !
मख्ख पर्छ्यौ मनमनै, बाहिर रीस देखाउँछ्यौ ।
माया गर्छु भन्दा मैले, दाँत खिस्स देखाउँछ्यौ ।
के सम्झिउँ मैले तिम्लाई, अटेरी या अबुझ भन,
अमृतको बखान गर्छु, तिमी बिश देखाउँछ्यौ ।
खुशीका पल तगारोले, सधैं छेके मैले ।
पीडा अनि दु:ख मात्रै, साथी देखे मैले ।
दया मानी ईश्वरले,चाह के छ सोध्दा,
सुख भन्छु सोच्दै थिए, दु:ख लेखे मैले ।
सत्यको वकालत गरें, करायो भने ।
नबोली केही रमिते भएँ , डरायो भने ।
पागल दुनियाँ भुली आफ्नै बाटो हिड्दै थिएँ,
लौ हेर ! यो मोरो त, बहुलायो भने ।
Posted by Jitendra Malla Labels: मुक्तक0comments
संयुक्त गजल --- सुसजी ।
((सुरेश सविन जितेन्द्र === सुसजी। ))
कैले दिक्क कैले ठीक्क, जिन्दगीको चलन साथी ।
ठीक्क भए ठिकै ठान्ने, दिक्क हुँदा ऐठन साथी ।
दु:ख सुख यै हो रीत, बाँच्नै पर्छ यिनै सित,
अमृत नै निस्कन्छ रे, बिष गर्दा मन्थन साथी ।।
आफू माथि भरोसा नै, उपचार ठूलो यहाँ,
गर्छौ किन बेकारमै, खुशीको नै दहन साथी ।।
सम्झाउँ कती आफैँलाइ, आखिर यो मनै न हो,
जती खोज्छु सुल्झाउन, बढ्छ झनै उल्झन साथी ।
।ईच्छा गरे बाटाहरु, दैवले नै खोल्छन् अरे ,
कर्म गरे फल मिल्छ, सुनेको यै कथन साथी ।।
जिजीविषा तिम्रो हाम्रो पूरा गर्न यो जीवनको,
लागौ हामी गर्न आफ्नो जिम्मेवारी बहन साथी ।।
निराशाको बादल फाट्यो, आशा झुल्क्यो देखें कतै,
तोड्छु अब अधेरीँका, यिनै सबै बन्धन साथी ।
आशा ज्योति बाली राखे अधेँरी त हराउँछ नै ,
जग्मगाउँछ झलमल आफै तिम्रो जीवन साथी ।
डग्मगाए पाइला तिम्रा, काँध थाप्न सधैं भरी,
आउनेछु म तिम्रै लागि, यही मेरो वचन साथी
गजल सिक्न चाहनेहरुका लागि--- स्वयम्बर सिंह लामा ।
--स्वयम्बर सिंह लामा
गजल अरबी भाषा बाट शुरु भएको देखिन्छ । गिजलो शब्द बाट अपभ्रांस भएर गजल भएको हो । गिजलोको अर्थ हेर्दा जंगलमा चरदै गरेको मृगाको पाठोलाई ब्याधाले बाण हान्दा जुन किसिमको चित्कार निस्कन्छ, त्यही हो । मतलब, बिछोड, करुणा, बेदना जस्ता बाट निस्कने चित्कार, गजल हो भनिन्छ ।
अरब देशहरुमा प्रेम र मदपानमा स्वतन्त्रता थिएन र आज पनि छैन । त्यसैले ती देशहरुमा गजलको माध्यम बनाएर मदिरा, जिन्दगी र प्रेमी, प्रेमिकाको बर्णन गरेको पाईन्छ । तर गजल अरबी, फारसी, उर्दु, हिन्दी हुँदै मोतिराम भट्ट मार्फत नेपाल भित्रीएर अहिलेको परिस्थिती सम्म आईपुग्दा यस्ले धेरै परिवर्तनहरु लिई सकेको छ ।
अहिले आएर गजल, जिन्दगी, प्रेम र मदिरा मात्रै नभएर समसामयिक बिषयलाई समेट्ने एउटा माध्यम बनेको छ ।
अहिले आएर गजल :
ग : गायात्मक
ल: लयात्मक जस्ता बिकसित् रुप लिइसकेको छ।
अहिले गजल प्रेमी, प्रेमिका र मदिरा संग मात्रै सिमित छैन भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्छ ।
अब यहाँहरूलाइ गजल लेख्नु मन लागेको छ भने यो लेख पढ्नुँसक्नुँहुनेछ।
गजल लेखन बारे छोटकरिमा :-
तपाईंलाई गजल लेख्न मन लाग्छ ? लाग्छ भने नियम संगतले लेख्नलाई केही नियमहरु जान्नु अनिवार्य छ है !
१. मत्ला : गजलको पहिलो शेर, जसको दुइटै मिस्रामा कफिया हुन्छ, गजल गाउदा यसलाई मुखराको रुपमा गाउनेले हरेक अन्तराको पछि दोहोर्याएर गायी रहँदा कर्णप्रिय सुनिन्छ ।
दु:ख आँफै आतिएर म संग रुन लाग्यो
एक थोपा आँशु झारी, पाप धुन लाग्यो
यहाँ दुवै मिस्रामा काफिया छन “रुन र धुन” । तर अरु सामान्य शेरमा कफिया तल्लो मिस्रा अर्थात मिस्रा-ए सानीमा मात्रै राखिन्छ ।
२. मिस्रा उला : हरेक शेरमा दुई हरफ हुन्छन् । पहिलो मिस्रालाई मिस्रा उला भनिन्छ । यसले भन्न खोजेको बिषयलाई उठाउछ ।
३. मिस्रा ए-सानी : शेरको दोस्रो हरफ, यसमा कफिया हुन्छ । मिस्रा उलाले उठाएको बिषयलाई यसले काफियाको आड्मा आधारित रहेर टुङ्याउछ ।
हतारमा मागेको फिलिङ्गो निभिसके छ
म चाहिँ बाह्रा बर्ष चुलो फू फू फूकेर बसे
हतारमा मागेको फिलिङ्गो निभिसके छ -मिस्रा उला
म चाहिँ बाह्रा बर्ष चुलो फू फू फूकेर बसे -मिस्रा ए-सानी
माथिलो मिस्रा र तल्लो मिस्रा बिच घनिष्ट संबन्ध हुनु पर्छ । अर्थात मिस्रा उलाले जुन प्रसंगलाई उठाउँछ, तल्लो मिस्रा अर्थात मिस्रा ए-सानीले पनि त्यही बिषयलाई टुङ्ग्याएको हुनु पर्छ ।
एउटा बिचित्रको शान्ति महसुस् गर्दैछु आज
हिजो देखि म आफ्नै ईतीहासलाई थुकेर बसे
४. सामान्य शेर: पहिलो र अन्तिमको बाहेक् अन्य शेरलाई सामन्या शेर मानिन्छ ।
५. काफिया: मिस्रा ए-सानीमा but मात्ला शेरको दुबै मिस्रामा अन्तिम अक्षर दोहोरिने गरि एकै अनुप्रासको शब्द राखिन्छ, त्यहि नै काफिया हो। काफिया नै गजलको मुटु हो, मगज् हो, रगत् मासु अनि सबथोक् हो । एउटा काफिया पछि अर्को कुन् काफिया आउछ भन्ने उत्सुक्ताले नै गजल सुन्न मज्जा आउछ ।
६. रद्दिफ : गाउनको लागि मात्रा पुर्याउन काफिया पछाडी राखिने, दोहोरि रहने एकै अनुप्रासको शब्द। गजलमा रद्दिफको अनिवार्य भने मानिन्न ।
काफिया “धुन र रुन ” पछिको “लाग्यो” चाँही रद्दिफ हो ।
७. तखलुस् : गजल् लेखकले आफ्नो परिचय दिनको लागि नाम वा अर्थ जनाउने गरी राखिने नाम वा उपनाम । मक्ता शेरमा राखिने लेखकको नाम् । यो जुन् मिस्रामा राखे पनि हुन्छ। तखल्लुस् पनि गजल लेखनमा अनिवार्य चाहि छैन ।
शुन्य लाग्छ जिन्दगि नै तिमी नहुँदा
बसन्तमा स्वयम्बरको धून बनि आउनु
८. मक्ता : गजलको अन्तिम शेर । जहाँ लेखकले आफ्नो परिचय खुलाउन तखल्लुस पनि राख्न सकिन्छ। नराख्दा नि फरक् चाहीँ पर्दैन ।
गजल बिधा धेरै फराकिलो बिधा हो । तर दुई वटा मिस्राहरुको भरमा धेरै अर्थको कथा रोचक र घोचक ढङ्गले भन्न सक्ने धेरै सक्तिशाली बिधा पनि हो । गजलको बारेमा यो सानो लेखमा मात्रै सिमित राख्न संभव नै हुँदैन !!!!
Posted by Jitendra Malla Labels: लेख0comments
((सविन ब्रो सित फेसबूकमा खेलिएको गजल दोहोरी । ))
शब्दकोशै रित्तियो कि? पर्नु पीर पर्‍यो साथी ।
यौटा गजल लेख्न पाए हुन्थ्यो होला कति जाती ।।
तिमीलाई लेख्नलाई चाहिन्छ कि पिर वेथा ।
दिन्छिन् उन्ले, चढाउ भाई मैयालाई फूल पाती ।।
माया, प्रेम, पिडा, खुशी, सपना र विपना त्यो,
कुनैले नि नभए'सि हेर जून तारा राती ।।
ब्यथाको के कमी छ र? मुइँया भाकौ अब मैले,
उन्को साथ भन्दा बरु एक्लोपना रै'छ जाती ।
माया पिरिम् जून तारा सपनाका छाडौ कुरा,
खुशी के हो भुलिसकें, दुखिरन्छ देब्रे छाती ।
पिडा हाम्रो एउटै हो, पिडा दिने मान्छे फरक।
तिम्रो दुखाई हेर्दा लाग्छ शायद् हो कि? जातै घाती ।।
माया भए अरु केही चाहिदैन कि त मित्र ?
खोक्नेहरु अझै खोक्छन् सबैभन्दा माया माथी ।
चाहेकै हो चोखो माया, लिन दिन सबैले नै ।
अल्झिदिन्छन् सम्बन्धमा स्वार्थहरू नाना भाँती ।
गजल - शेर मेरा
लेख्न खोजे गजल जब, भाग्न थाले शेर मेरा ।
नाना थरी भावहरु, माग्न थाले शेर मेरा ।
मतला र मकताको, ग्रह शायद् जुरेन कि,
यौटा पश्चिम् अर्को पुर्व, ताक्न थाले शेर मेरा ।
सकिन खै शब्द भर्न, खाली रहे मिसरा ती,
बिरुद्धमा आज मेरै, लाग्न थाले शेर मेरा ।
लय थाम्न खोजेकै हुँ, कता चुकें होश छैन,
अनिदोंमै आज फेरी, जाग्न थाले शेर मेरा ।
देशभक्ती, नशा, व्यथा, पच्दैन रे आजभोलि,
लाग्छ पृथक् स्वाद कुनै, चाख्न थाले शेर मेरा ।
नेता, राजनीति र हामी जनता !!
'राजनीति' र 'नेता' । यी दुई शब्द सुन्ने बित्तिकै हाम्रो कन्सिरी तात्छ । हामी सकेसम्म कुरा गर्न चाहन्नौ यी बिषयमा, कुरा गर्नै परे फलाक्छौ , नेता भन्या यस्तो, राजनीति यस्तो । शुरु हुन्छ कलियुगको महाभारत ।
नहोस् पनि कसरी, हामी धेरै त्यही समाजमा हुर्केका हौ, जहाँ हामीलाई रटाइन्छ, सुनाइन्छ, "'नेता' भनेका खत्तम हुन्, बिग्रेकाहरु मात्र राजनीति गर्छन् । पढेलेखेकाले त डाक्टर, ईन्जिनियर पो बन्नु पर्छ त । " यसरी राजनीति र हामीबीच बच्चा बेलादेखी नै लक्ष्मणरेखा कोरिन्छ ।
मैले सानोदेखी नै MEMORANDUM हरु हेर्ने गर्थे साथीहरुका र आफुले पनि बनाएको थिएँ । त्यस्मा राजनीतिको बारेमा यसरी आफ्नो विचार पोखिएको हुन्थ्यो, " I HATE POLITICS!!! ; POLITICS IS A DIRTY GAME!! ALL POLITICIANS ARE LIERS!! ; POLITICIANS ARE DOGS!!" । सानोमा नै हामीमा यो भावले डेरा जमाइसकेको हुन्छ, ठुलो भएपछी जब देख्दै र भोग्दै जान्छौ, यस्ले अझ विकराल रुप लिन्छ र हामी ANTI-POLITICS र ANTI-POLITICIAN को पगरी गुथ्न वाध्य हुन्छौ ।
अहिले पनि जब राजनीतिको बारेमा कुरा छेडिन्छ, तब धेरै जनाले भनेको सुन्छु, "मलाई राजनीतितिर रुची छैन !; मलाई राजनीतिको बारेमा केही थाहा छैन!; ल साथी त नेता बन्ला जस्तो छ ! ; किन राजनीतिको बारेमा गफ गरेर समय बर्बाद गर्नु यार, अर्को बिषयमा कुरा गरौ न !" यी र यावत कुराहरु मैले भोगेको, सुनेको र देखेको छु । हामी त्यही हौ, जस्लाई राजनीति तिर चासो छैन, राजनीति बुझ्दैनौ या चाहन्नौ, तर राजनीतिक नेतालाई गाली गर्न भने कत्ती पनि हिच्किचाउन्नौ ।
अब नेताको कुरा गरौ !! नेताको नाम सुन्नासाथ सबैको कन्सिरी तात्छ । त्यो नेताले देश बेच्यो, आफ्नो मान्छे मात्र राख्यो त्यो मन्त्रालयमा । त्यो नेता प्रधानमन्त्री भएर पनि केही गर्न सकेन, समस्याहरु जस्ताको त्यस्तै छन् । भाषण मात्र दिन्छन्, काम केही गर्न सक्ने हैनन्, साला चोरहरु(अझ अभद्र शब्दहरु पनि प्रयोग गरिन्छन् )।
"हाम्रो देश त खत्तम भयो यार!!", एउटाले पीडा पोख्छ । "देश खत्तम हैन यार, सिस्टम खत्तम हो", अर्को अलिक जान्ने मान्छे भन्छ, "सबै नेताहरु भ्रस्ट मात्र छन्, कर्मचारीहरु त्यस्तै। देशको बारेमा कसैले पनि सोच्दैनन्, आफ्नै पेट भर्नतिर मात्र लाग्छन् । " आदी इत्यादी ।
यहाँ सिस्टम भनेको नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारी मात्र हैन, हामी पनि पर्छौ । हामी यानी कि नेपाली जनता । सिस्टम बिगार्नुमा हाम्रो पनि कम योगदान छैन । कुनै काममा ढिलाई हुन्छ भने हामी राजनीतिक नेता गुहार्छौ र परेमा घूस खुवाउन नि पछी पर्दैनौ । नियम मिच्न हामी अघी छौ, घूस खुवाएर भए पनि हामीलाई हाम्रो काम(गलत होस् या सही) पुरा हुनुपर्छ । चाहेको कुरा पुगेन भने आन्दोलनमा उत्रिन कसैले रोक्न सक्दैन हामीलाई । अर्कोले बन्द(आन्दोलन)गर्दा हामीलाई सास्ती हुन्छ, आफुले बन्द(आन्दोलन) गर्दा अरुलाई पर्न जाने सास्तिको बारेमा सोच्नु पर्दैन ?
राजनीतिक दलहरु, सडक र सदनको खेल खेल्न ब्यस्त छन्। जबसम्म सदनमा हुन्छन्, कानमा तेल हालेर बस्छन् । यही बेला हो भनेर राष्ट्रको ढुकुटी आफ्नो बनाउनतिर ब्यस्त हुन्छन् र सडककाहरु सदनमा भएकाको बिरोध गर्छन्, कुनै राम्रो काम शुरु गर्न आँटे अवरोध सिर्जना गर्छन् । निकम्मा सदनकाहरुको पालो पुगेपछी सडकमा आउँछन्, हामीलाई केही गर्नै दिएनन् भन्छन्, फेरी उही पहिले सडकमा भएकाले गरे जस्तै रीत दोहोर्याउँछन् । यही रमिता हेर्दै र तिनिहरुलाई सराप्दै बस्छन् जनताहरु ।
मैले हिमाली किरण ज्यु र सदिप सुमन भुजेल ज्युकाका शब्दहरु सापटी लिएँ, नेता र राजनीतिको परिभाषा दिन, "राज्यको नेतृत्व (वा सम्बन्धित)का लागि गरिने क्रियाकलाप नै राजनीति हो", "कुनै पनि समूह लाइ नायकत्व प्रदान गर्ने लाइ नेता भन्ने गरिन्छ ।" "राज == राज्यको, निती == अनुशासनमा बाँध्ने कडी । नेता== अरुलाई सही मार्ग देखाउन सक्ने, जाने बुझेको मान्छे । "
नेता अर्थात LEADER सँग हाम्रो सानोदेखी नै घनिस्टता हुन्छ । घरको मुली, नेता ; स्कूलमा क्लास मनिटर, नेता; कुनै समुह प्रमुख, नेता; अफिसको प्रमुख(BOSS) , नेता । यदी माथि उल्लेखित कुराहरु हामी आँफै हौ भने, या हामीले आफ्नो कृयाकलाप आँफै सम्हाल्छौ भने, हामी नि नेता । तर हाम्रो दिमागमा 'नेता' भन्नासाथ राजनितिक नेता नै आउँछ, नानीदेखी लागेको बानी ।
गिरिश पोख्रेल ज्युको भनाइ पनि यहाँ राख्न चाहन्छु, "राजनीति र नेता भनेका दुवै नभइ नहुने हुन् जहाँ राजनीति हुन्छ त्यहाँ नेता हुन्छ । नेता गतिलो र अगतिलो हुनु अर्को पक्ष हो । राजनीतिलाई सही बाटोमा लैजानका लागि दूरदर्सी नेता चाहिन्छ । हामी नेपालीहरुले त्यस्ता दूरदर्शी नेता नपाएका कारण सताब्दियौंदेखि दुःख पाइरहेका छौं । अर्को कुरा नेता बनाउने पनि हामी तर बनाइसकेपछि नेता सधैं नेताकै सानमा रहन चाहन्छ त्यो नेता सक्षम भएन भने पनि नागरिकहरुले नपत्याए पनि एकपटक नेता बनेको हुँ भन्दै त्यो नागरिक हुन जान्दैन त्यसले गर्दा त्यस्ता नेताले मुलुक पुनः डुवाउने बाहेक केही गर्न सक्दैनन् ।" अलिक थपें, जहाँ नेता हुन्छ त्यहाँ निती(PLANNING) हुन्छ, फरक यती हो सबैको फरक फरक हुन्छ, नेतानुसार । त्यो निती या त नेताको आफ्नै हुन्छ, या उस्ले सबैसित सल्लाह लिएर बनाएको पनि हुन्छ । राज्यको लागि हो भने 'राजनीति' र अन्य ठाउँको लागि छुट्टै नाम हुनसक्छ ।
किरणले भने झै अब यो देशलाई देशभक्त तानाशाहको खाँचो छ । तर त्यो कहिले जन्मिन्छ, कुनै दैविक चमत्कार त हुँदैन र त्यो आशमा बस्यौ भने मुलुकले अझै ठुलो क्षति बेहोर्ने निश्चित छ ।
'निती'(PLANNING) त हामीले धेरै ठाउँमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौ बिभिन्न रुपमा, तर राजनीति यदी बुझ्दैनौ या चासो राख्दैनौ भने देशको बल्झिएको स्थिती अझै पनि बल्झिने निश्चित छ । राजनीतिको बारेमा जानकार हुनु र चासो राख्नु भनेको राजनीति गर्नु हैन, देशमा र बिदेशमा के के भईरहेको छ र कसरी आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यो कुराको बारेमा चनाखो हुनु हो । यसबारेमा हामी सजग हुन जरूरी छ ।
(((यो लेखमा प्रयोग भएका केही विचारहरु(विभिन्न साथीहरुले मेरो Facebook STATUS मा कमेन्ट गर्नुभएको) बाहेक बाँकी मेरो नितान्त व्यक्तिगत धारणा हो । हुन सक्छ, यी भाव कसैका लागि गलत पनि!!! त्रुटिहरु भए अवस्य खबरदारी गर्नु हुनेछ भन्ने आशामा । )))
Posted by Jitendra Malla Labels: लेख 1 comments